RV Newsletter : mandinika ny politika, ny fomba fanao, ary ny zava-misy marina mikasika ireo vaovao disoina ny Digital Citizen Summit · Global Voices teny Malagasy
RV Newsletter : mandinika ny politika, ny fomba fanao, ary ny zava-misy marina mikasika ireo vaovao disoina ny Digital Citizen Summit
Voadika ny 28 Aogositra 2020 12:34 GMT
(Fanamarihana: Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2019. Misy efa tena lany andro raha ny daty voalaza ato anatiny, saingy ny torohay voatahiry ato anaty lahatsoratra kosa dia mety hanampy namana maro any aoriana, indrindra fa ireo mety hanana faniriana hitady tosika sy famatsiana ho an'ny tetikasany)
Ny fandraisana anjaran'ny Tambajotran'ireo Manampahaizana manokana momba ny fahafehezana ny media sy ny fampahalalambaovao – Media and Information Literacy Experts Network (MILEN) nandritra ny Digital Citizen Summit. Sary an'i Osama Manzar, nahazoana alàlana
Ny Digital Citizen Summit (DCS) natao tao Delhi, India tamin'ny 12 Novambra 2019 dia nahafahana niditra sy nandalina ny tontolo sarotra fehezina misy ny fandisoana ny vaovao ety anaty aterineto, tamin'ny alàlan'ny andry telo samihafa: ny politika, ny fomba fanao, ary ny zavamisy sosialy. Navondron'ny DCS 2019 daholo ireo manampahaizana manokana amin'ilay resaka, irei akademisiàna, ireo mpandrafitra ny pôlitika, ireo mpisolovava, ireo mpahay teknolojia, ary ire mpikambana avy amin'ny fiarahamonimpirenena, mba ho fanamorana ny fiofanana, ny fifampizaràna fahalalàna, ary ny fifampizaràna traikefa iaraisan'ny rehetra ho entina mamantatra ireo dingana manaraka mankany amin'ny fandrafetana vahaolana mitodika amin'ny fijerena manontolo ny tanjona kendrena mba hiatrehana ireo fanamby tsy mitsahatra mitombo iainan'ny fiarahamonina sy ny olompirenena eo am-pamakivakiana ny zava-mahazendan'ny filazana vaovao diso.
Nisy ampahany tamin'ny fandaharampotoana nafantoka tamin'ny fanabeazana momba ny Media sy ny Fampahalaambaovao amin'ny maha-fomba firoso tsy maneritery azy nefa mitodika amin'ireo olompirenena mba hijerena ny fampitàna vaiovao diso, ka ny Media and Information Literacy Expert Network (MILEN) no nitantana azy (Fanamarihana: ao anatin'io tambajotra io ny Rising Voices). Ity io dia napetraka tao anatin'ny sahankevitry ny fifampizarana traikefa sy fahalalàna teny anivon'ireo mpikambana avy amin'ny fiarahamonimpirenena, ny mpanao gazety, ireo mpanamarina ny zavamisy ary ny fitantanan-draharaha. Nohamafisina ny DCS 2019, tsy hoe fotsiny tamin'ny herin'ireo mpandray fitenenana, fa koa tamin'ny fahasamihafàn'ny karazan'ireo tonga nanatrika, izay nahitàna ny fandraisana anjaran'ireo olona avy amin'ny firenena maro, Repoblika Demôkratikan'i Kôngô hatrany Yemen. Nahitàna ihany koa ireo mpikambana avy amin'ny media mahazatra sy ireo fanolo, ireo fikambanana misahana ny resaka lalàna, ireo akedemisiàna, diplaomaty ary fikambanana sivily.
Raha hanao topimaso sy hijery sary misimisy kokoa, iangaviana ianao hijery ny #DCS2019 sy #DigiCitizen2019 ao amin'ny Twitter.
VAOVAO MISIMISY KOKOA AVY AMIN'NY BILAOGIN'NY RISING VOICES BLOG
Anatin'ny fankalazana ny Taona Erantany ho an'ny Fiteny Teratany 2019 (#IYIL19), nanambatra ny heriny ny Rising Voices sy ireo mpifanome tànana aminy tamin'ny fikarakaràna ireo fanentanana efatra Twitter ifandimbiasana mba hanasongadinana ny asan'ireo mpikatroka ho an'ny fiteny teratany manerana izao tontolo izao. Raha liana ianao te-hahafantatra ny sata amin'izao fotoana misy ireo fiteny teratany manerana izao tontolo izao, hatramin'ny hoe inona no idirn'ny fanomezana aina sy / na fampiroboroboana ataon-dry zareo, iangaviana ianao hanaraka ireo fanentanana ataonay ao amin'ny Twitter! Ary raha toa ianao maniry hahalàla mismisy kokoa momba ireo mpampianatrano tato ho ato, mety tena tianao mihitsy ny hitsikilo kely ireo lahatsoratra fampahafantarana ny mombamomba an-dry zareo, toy izao manaraka izao:
Elías Caurey [es] ho an'ny Guarani, fiteny teratany avy ao Amrika Atsimo, sady iray amin'ireo fiteny ofisialy ao Paragoay
Neima Paz [es] ho an'ny Wayuunaiki, ilay fitenin'ny vahoaka teratany Wayuu avy ao avaratra andrefan'i Venezoelà sy ny Saikinosy Guajira ao avaratra atsinanan'i Kôlômbia
Ramzy Muliawan ho an'ny fiteny Minangkabau, fitenin'ireo Minang (vondrona foko avy any Sumatra Andrefana, Indonezia)
Mila fanampiana ve ho entinao mapivoatra ny hevitrao manodidina ny fanamarinana zava-mitranga? Te-hanampy anao ny “Facebook Journalism Project” sy ny “International Fact-Checking Network” amin'izay lafiny izay, amin'ny alàlan'ny hetsika Fact-Checking Innovation ao aminy. Ankoatry ny fanampiana ara-bola, io fanohanana io dia hanome ihany koa fahafahana iray hahazo famatsiambola hampiroboroboana ny fifandraisan-dry zareo eny an-kianja. Iangaviana ianao hiijery ato ny antsipirihany. Application due: December 8, 2019 (round one) / January 17, 2020 (round two)
Mpamokatra horonantsary fanadihadiana ve ianao ary mitady famatsiambola ho an'ny tetikasanao? Ny “International Documentary Film Festival” ao Amsterdam dia manome fahafahana vitsivitsy ahazoana famatsiambola ho an'ireo mpamokatra sarimihetsika avy amin'ny faritra samihafa amin'ny alàlan'ny Tahirimbola IDFA Bertha ao aminy. Iangaviana ianao hiijery ato ny antsipirihany ho an'ny sokajy tsirairay hatramin'izay takiana mba hahafahana mirotsaka ho amin'izany.
Mahafantatra mpamorona rindrakajy miasa ho an'ny tombontsoan'ny rehetra ve ary nandray anjara tamin'ny famoronana vokatra iray mampiasa loharano misokatra, izay nisy fiantraikany nitondra fiovàna sôsialy? Asainay ianao hanopy maso ny Loka Pizzigati, loka isantaona manome voninahitra ny olontsotra tahaka izany noho ny fandraisan'izy ireny anjara hisiana tontolo iray mendrika kokoa. Iangaviana ianao hijery ato ny antsipirihan'ny fomba firotsahana hatramin'ny fomba fisoratana : fanondroana olona. Submission due: December 15, 2019
Tianao ve ny hanosika lavidavitra kokoa ny fahaizana manokana efa anananao eo amin'ny sehatry ny asa fanaovana gazety mpanadihady ny resaka ara-bola? Ny ” Free Press Unlimited” dia manasa ireo mpirotsaka avy ao Azia hanjohy azy mandritra ireo andro dimy fiofanana hatao ny volana Martsa ao Indonezia mba hanamafisanaireo traikefa amin'ny fanadihadiana momba ny fanararaotana amin'ny hetra, ny famotsiambola, sns… nefa sady miaro ny aina ihany koa. Iangaviana hijery ato ny antsipirihany. Application due: November 25, 2019
FIANTSOANA FANDRAISANA ANJARA
Ny FRIDA, Young Feminist Fund, dia mitady mpanolotsaina vaovao manerana izao tontolo izao hanjohy ny Kaomity Fakankevitra Erantany 2020 ao amin-dry zareo! Ireo mpanolotsaina dia hanampy amin'ny dingana fanomezana fanampiana, amin'ny fitarihandàlana stratejika sy amin'ny fanohanana ankapobeny ireo mpisitraka fanampiana. Iangaviana ianao hijery ato ny antsipirihan'ny fisoratana sy ny zavatra takiana mba ho lany amin'izany. Application due: December 5, 2019
IREO HETSIKA & KAONFERANSA ATO HO ATO
Ho avy tsy ho ela ny “Community Network Exchange 2019″. Ao India no hatao ny hetsika amin'ity taona ity ary handinika ireo tarakevitra manaraka ireto: “Ny tambajotran'ny vondrompiarahamonina ve afaka ho lasa Aterineton'ny vahoaka” ary koa ny fomba nahatonga ny Aterineto sy ny media nomerika ho fitaovana tsy azo ihodivirana hamaliana filàna isankarazany amin'ny fiainantsika andavanandro. Liana hahafantatra misimisy kokoa ve? Iangaviana ianao hijery ato ny antsipirihany. Date: December 13-15, 2019
HAINO, VAKY, JERY FANAMPINY
Ara/Cielo (a poem in Guarani) as shared by Elías Caurey via YouTube
The great Indian language trouble via Deccan Chronicle
Eyes Beyond the Border: Using Video to Defend Migrant Rights via The WITNESS Media Lab
Misorata anarana hahazo ny Taratasim-pifandraisan'ny Rising Voices
Fisaorana ho an'i Anulekha Nandi sy Eddie Avila tamin'ny fanampiana tamin'ity taratasim-pifandraisana ity.
10 ora izaySoeda